Posted on मार्च 23, 2010 by आर. बी. बुढाथोकी	सुजाता र दागबत्ती,
आइतबार साँझ सयपत्री, रक्तचन्दन र श्रीखण्डले सजाइएको पशुपति आर्यघाटस्थित १ नम्बर चितामा उनका ‘सानो बुबा’ चीरनिद्रामा थिए । त्यसो त उनको प्राण पखेरू अघिल्लो दिन १२ बजेर १० मिनेट जाँदा नै उडिसकेको थियो । तर, पञ्चतत्त्वले बनेको भौतिक शरीरलाई त्यसैमा विलय गराउन हिन्दु परम्पराअनुसार दागबत्ती दिनुपर्ने कर्म बाँकी थियो । उनको अन्त्येष्टिमा सिंगो देश शोकमग्न थियो । आर्यघाट क्षेत्रको साँघुरो भूगोलले उनका सबै शुभेच्छुलाई अटाउन नसके पनि घर र कार्यालयमा बसेर टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्नेहरू निकै भावविह्वल थिए । छोरी सुजाताले बाबुलाई दागबत्ती दिएको त्यो क्षणलाई कतिले सामान्य र कतिले नयाँ रूपमा लिए । त्यसो त छोरीले दागबत्ती दिएको यो घटना नेपाली समाजमा पहिलो होइन । यसअघि पनि यस्ता घटनाबारे समाचार आइसकेका छन् । सुजाता सामान्य एउटा नेपाली महिला मात्रै नभएर ‘हाइप्रोफाइल’ हुन् । यसर्थ यो अरूभन्दा महत्त्वपूर्ण छ । यसलाई महिलाको सांस्कृतिक अधिकारको दिशामा ‘ट्रेन्ड सेटिङ’का रूपमा लिन सकिन्छ । भनिन्छ नि, ‘ठूलाबडा’ ले गरेका सामान्य काम पनि सर्वसाधारणका लागि प्रोत्साहन र नमुना हुनसक्छ । तसर्थ, सामान्य महिलाले दिने दागबत्ती र महानायक,युगनायकजस्ता उपमा पाएका पिताकी उपप्रधानमन्त्री छोरीले दिएको दागबत्तीमा पक्कै पनि ठूलो अन्तर छ र यसको सन्देश पनि अर्थपूर्ण हुन्छ । नेपाली संास्कृतिक क्रान्तिमा यो आयाम हुनसक्छ ।
Filed under: समचार « बाहुनहरु बंगुरपालनमा नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरिएका महिलाहरुलाई रक्षामन्त्रिले शिकारी भनिन »
kedarnath kharel, on मार्च 23, 2010 at 8:17 अपराह्न said:	Best Artical and good profecational writer.best of luck R.B.Sir.